OnePlus5နှင့်အတူစွပ်စွဲခံထားရသောဓါတ်ပုံများအမြောက်အများသည် | Androidsis
OnePlus5ကင်မရာဖြင့်နမူနာယူထားသောဓာတ်ပုံ
OnePlus5နှင့်ရိုက်ကူးခဲ့သည့်ပုံ ၄ ပုံသည်မကြာသေးမီကအင်တာနက်ပေါ်တွင်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဓာတ်ပုံများအားနောက်တစ်ခုဖြစ်သော OnePlus အထင်ကရပိုင်ရှင်ဟုယုံကြည်ရသည့်အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ EXIF ​​ဒေတာသည်မူရင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဟုခေါ်သည် OnePlus A5000.
ဥပမာအားဖြင့်, el OnePlus3မော်ဒယ်နံပါတ် A3000 ရှိပါတယ်, သောညွှန်ပြသော code A5000 သည် OnePlus5နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, EXIF ​​ဒေတာသည်လတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ်ကိုပြသပြီးစက်၏မူလနေရာဖြစ်သောတရုတ်နိုင်ငံ၊ Shenzen တွင်စက်ကိုနေရာချသည်။
OnePlus5နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများအရတရုတ်ထုတ်လုပ်သူ၏နောက်ဆိပ်ကမ်းတွင် 16-megapixel ကင်မရာနှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားသည်။ သို့သော်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်းသင့်အားထားခဲ့သည့်ပြခန်းတွင်ဒုတိယအကြိမ်ဓာတ်ပုံ မှလွဲ၍ ကျန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာပုံမှန်ထက်ပိုမိုပြင်းထန်သောမှုန်ဝါးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
အလားတူစွာ OnePlus5သည်လည်းမျက်နှာပြင်တစ်ခုယူဆောင်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် 5.5 လက်မအရွယ် AMOLED Full HD resolution (1920 x 1080 Pixels) နှင့်အတူ Processor ကို Snapdragon 835, RAM6or 8 GB, အ Adreno 540 GPU နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ 64 / 128GB ရှိသည်.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် OnePlus5တွင် 4000mAh ဘက်ထရီပါရှိပြီး operating system သည် Android 7.1.1 ကိုအခြေခံထားသော OxygenOS ဖြစ်သည်။
OnePlus5ဖြင့်ရိုက်ယူထားသောဓာတ်ပုံမှ EXIF ​​အချက်အလက်
သတိပြုသင့်သည်မှာတစ်ခါတစ်ရံ EXIF ​​ဒေတာများကိုမှားယွင်းစွာလုပ်နိုင်သည်၊ သို့တိုင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် OnePlus5သည်စျေးကွက်ရှိ LG G6 ကဲ့သို့သော dual-camera ပါသည့် LG GXNUMX ကဲ့သို့သောရှုထောင့်အတိုင်းသာနေလိုပါကလာမည့် OnePlus XNUMX သည် software နှင့်ကင်မရာကောင်းကောင်းပေါင်းစပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင်ကျယ်ပြန့်သောထောင့်မှန်ဘီလူးတစ်ခုဖြစ်သည်။
Fuentes: စစ်မှန်သော-Tech မှ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » OnePlus » OnePlus5နှင့်အတူစွပ်စွဲခံရသည့်ဓာတ်ပုံများအများအပြားပေါက်ကြားခဲ့သည်
Sony Xperia X Ultra ကို Ultra-wide screen ဖြင့်ပြသထားသည်